/Blog/Ithala/Indlela yokusebenzisa I-Trenbololone Recipe yokudibanisa i-Trenbolone Inanthate Powder 2019
ezaposwa ngomhla 05 / 21 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Yintoni iTrenbolone Enanthate?
I-Trenbolone E (i-Trenbolone enanthate) enye ye-steroids engabalwa njengezongezelelo ezinamandla ezongeza kwi-mass mass. Nangona okokuqala kwakusetyenziswa ukukhula kwemisipha kwizilwanyana, ukufunwa kwayo phakathi kwabalimi bomzimba kuye kwanda kwiminyaka ngenxa yokusebenza kwayo ekukhuleni kwemisipha.
I-Tren E (i-Trenbolone enanthate) yindlela ede kakhulu eqinisekisiwe ye-trenbolone kwaye inezinga lokumanyisa ixesha elide. Ngenxa yoko, isantya apho sidityaniswe khona emzimbeni siyancipha. Unesigamu-ubomi seentsuku ezilishumi elinambini, okwenza kube nexesha elincinci lokunciphisa. Ixesha elide lobomi, nangona kunjalo, ligalela ekusebenzeni ixesha elide.
Kwenziwa kanjani benzisa i-trenbolone recipe ukuxuba i-trenbolone enanthate powder
Izithako ofuna ukulungiselela
I-trenbolone Enanthate recipe
100mg / mL I-trenbolone recipe ye-Tanbolone ye-100mL
10g I-Trenbolone I-powanate enanthate (7.5mL)
I-5mL Ioli echitshiweyo
I-3mL kunye ne-20mL / 60ml isirinji ene-18-21 isinge
I-Trenbolone Inanthate homebrew inyathelo ngesinyathelo
-Step 1: Gqiba i-steroid i-trenbolone enanthate powder
-Step 2: Yongeza i-trenbolone powder, i-BA, kunye ne-BB kwi-beaker
-Step 3: Phula i-beaker kwindawo yokuhlamba amanzi
-Step 4: Yongeza ioli edibeneyo
-Step 5: Ukucoca
-Step 6: Zibangele zikhuphe iifowuni
Isinyathelo 1: Gqiba i-steroid i-trenbolone enanthate powder
Sebenzisa i-trenbolone enanthate iresiphi yokwenza i-trenbolone enantahte ioli, isinyathelo sokuqala othabathayo ukulinganisa I-Trenbolone Inanthate powder beaker glass. Qinisekisa ukuba ufezekise ukuchaneka kwenkcazo ngexesha lokulinganisa inkqubo yokuphepha ukuba uninzi okanye ungaphantsi kweTren Enanthate.
Inyathelo 2: Yongeza trenbolone i-powder, i-BA, kunye ne-BB kwi-beaker
Ukongeza iBenzyl Benzoate (BB) kunye ne-Benzyl Alcohol (BA) kwaye ugxininise. I-Trenbolone eluhlaza iqala ukuchithwa kwi powder. Ukuba ufuna ukwandisa ukukhawuleza kwenkqubo, khangela isinyathelo 3.
Inyathelo 3: Ukushisa i-beaker kwindawo yokuhlambela ngamanzi
Ukutshisa i-beaker kwindawo yokuhlambela ngamanzi kukhulisa ijubane lenkqubo. Amanzi akufanele atshise, makushushu ngenxa yokuba ukushisa okuphezulu kungakhokelela kwinqwelo.
Yongeza ioli edibeneyo efudumeleyo kumxube uze udibanise kakuhle. Qinisekisa ukuba ayikho i-hormone ye-swirls ngaphambi kokuba uqhubekele kwinkqubo yokucoca. Qinisekisa ukuba i-bottom of the beaker ibonisa kuphela isisombululo se-Trenbolone Enanthate esicacileyo.
Inyathelo 5: U kucoca
Yenza isisombululo kwisirinji enkulu okanye encinci (eli liza kuphinda liphindwe kaninzi). Xhuma isihlunu kunye nenaliti kwi-syringe uze uyijobe kwi-vial oyinyumba.
Siphula isisombululo kwisilathisi sesirinji kwi-vial ngokufaka ingcinezelo ethile kuyo. Ungasebenzisi utyinzelelo oluninzi kuba le nto ingahlula isihlungi sesirinji kwaye ungagqiba kwi-mess.
Ukuba uqaphela ukuba inkqubo yokucoca iphuculwa, unokutshintsha iifayile ze-syringe rhoqo xa usuqedile ukucoca 40ml
Inyathelo 6: Ukuzikhubaza ngeeflips
Xa usuyenziwe ngenkqubo yokucoca, yenza isisombululo.
Isishwankathelo, inkqubo ye-Trenbolone e homebrew njengoko kukhankanywe ngasentla, isinyathelo sokuqala othabathayo kukuba ulinganise i-Trenbolone Enanthate powder kwi-glass beaker kwaye ungeze iBenzyl Benzoate kunye ne-Benzyl Alcohol (Ungathenga i-trenbolone enanthate powder online umxhasi we-steroids). I-Trenbolone eluhlaza iqala ukuyidiliza kwi powder, kodwa ukuba ufuna ukukhawulezisa inkqubo, unokutshisa i-beaker kwindawo yokuhlamba amanzi. Amanzi akufanele atshise kakhulu kodwa afudumele ngenxa yokuba ubushushu obuphezulu bungakhokelela kwi-oxidation.
Yongeza ioli edibeneyo efudumeleyo kumxube uze udibanise kakuhle. Qinisekisa ukuba ayikho i-hormone ye-swirls ngaphambi kokuba uqhubekele kwinkqubo yokucoca. Yenza isisombululo kwisirinji enkulu okanye encinci (eli liza kuphinda liphindwe kaninzi). Xhuma isihlunu kunye nenaliti kwi-syringe uze uyijobe kwi-vial oyinyumba.
Ukuba uqaphela ukuba inkqubo yokucoca ifuthe, unokutshintsha iifayile ze-syringe rhoqo xa usenza u kucoca 40ml. Xa usuyenziwe isisombululo.
Nazi izimbalwa zeTrenbolone Enanthate ezixhamlayo eziza kule tafile xa unqumle ukuyisebenzisa.
-Ukubonelela ngokukhawuleza kokukhula kwemisipha
-Phakamisa ukugcinwa kwe-nitrogen
-Qalisa amanqanaba e-cortisol emzimbeni.
-Ungenayo Ukulahlekelwa ngamatye
Inika ukukhula ngokukhawuleza kwamasipha
Ukusebenzisa i-Trenbolone Enanthate yindlela efanelekileyo yokukunceda ukuba uqaphele ukukwazi ukufikelela kwakho ngokubanzi xa unqwenela ukufikelela ngokukhawuleza kokukhula kwemisipha.
Trenbolone Enanthate ngokungathandabuzeki kuncedo kakhulu ekukuvumela ukuba unqunywe ngelixa ulondoloze ubunzima bomzimba obubuthakathaka ngexesha lokusika.
Ukukhuthaza ukugcinwa kwe-nitrogen
Ngokungafaniyo namanye ama-steroids anesistim esiswini sisiphumo sokugcinwa kwamanzi, i -Trenbolone Inanthate weight gain is ngenxa yokukhula kwe-nitrogen, ekhokelela ekukhuleni komzimba ngokusisigxina.
Ukulawula amanqanaba e-cortisol emzimbeni.
Trenbolone Enanthate lawula inani le-cortisol eveliswayo ngoku kwandisa ukuphulukiswa nokuphulukiswa kwongezelela ukuqina kwabo ngexesha lokuzivocavoca.
Uncedo ekulahlekeni kwexabiso
Ngethuba loqeqesho, abadlali abaninzi bathanda ukusebenzisa oku njengomthombo wamandla endaweni yokutya isitashi esingakhokelela ekuzuzeni ubunzima.
Ukuba kuluhlu lwezona zinto zinamandla kakhulu steroids, I-Trenbolone Enanthate kufuneka isele ibe enye ye-steroids yakho eyintandokazi. Ukuba uceba ukuwusebenzisa, akufanele ukhathazeke. Unokugqiba ukugqiba okanye ukuthenga iTrenbolone Enanthate online.
I-Anabolic Steroids kwaye Yenza, Uprofesa Frank, iphepha 1-47
I-Anabolic Underground, uWilliam Llewellyn, uRonny Tober
Anabolics, uWilliam Llewellyn
2019 Indlela yokwenza i-testosterone enanthate homebrew kwiimpawu ze-6 I-DECA powder-Ultimate Guide Indlela yokwenza iNandrolone Decanoate (Durabolin)